Radio Dhangadhi 90.5 MHz | के फेसबुकमा फ्रेण्ड रिक्वेस्ट पठाउनु पनि उत्पीडन हो ?
पत्रकार अली मोइन नवाजिशले फेसबुकमा रिक्वेस्ट पठाउनुलाई उत्पीडन भन्नु निकै हास्यास्पद तर्क रहेको बताएका छन् । उनले आफ्नो फेसबुकमा लेखेका छन्: यसपछि अब के कसैसँग कलम माग्नुपनि उत्पीडन हुन्छ ? अनि कसैलाई तिन सेकेण्ड भन्दा धेरै हेर्नुपनि उत्पीडन हुन्छ ?
बीबीसीबाट साभार गरिएको ।
आइतबार १९, कार्तिक २०७४ १२:२१ मा प्रकाशित ।
स्वास्थ्य सम्बन्धी १०० रोचक तथ्य
समितिविचको विवादले गोदावरी धाम नदी कटानको जोखिममा